मे मा टोकियो मौसम! तापमान, वर्षा, कपडा - Best of Japan
टोकियो, सेन्सोजी मन्दिरको अगाडि जापानको किमोनो लगाएको केटी, जापान = शटरस्टक
जापान मा! सबै भन्दा राम्रो मौसम। हिमालहरू पनि सुन्दर छन्! >
यदि तपाईं मेमा टोकियो जानु भयो भने मौसम धेरै सहज छ। यो दर्शनीय ठाउँहरू भ्रमण गर्नका लागि उत्तम मौसम हो, त्यसैले सम्भव भएसम्म फाइदा लिनुहोस्। यद्यपि मौसम ढिलो मेमा अस्थिर हुनेछ। यस पृष्ठमा, म जापान मौसम संघ द्वारा जारी मौसम डेटाको आधारमा मेमा टोकियोको मौसमको बारेमा छलफल गर्नेछु।
तल मेमा ओसाका र होक्काइडोको मौसमका बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडो साथ साथै टोकियो जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम टोकियो भन्दा बिलकुलै फरक छ।
वसन्तका लुगाहरूका लागि, कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
यदि तपाईं वसन्त (मार्च, अप्रिल, मे) को समयमा जापान भ्रमण गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, यात्रा गर्दा तपाईंले कुन लुगा लगाउनु पर्छ? वास्तवमा, जापानी मानिस प्राय: वसन्त inतुमा के लगाउने भन्ने बारे चिन्ता गर्छन्। सबै पछि, तापक्रम बिस्तारै यस समयमा न्यानो हुनेछ, तर यो अझै पाउन सक्छ ...
फोटोहरू: मेमा जापानी ल्याण्डस्केप - वसन्तको लागि उत्तम मौसम
May is the best month for spring in Japan. Beautiful new greenery is shining everywhere. People are enjoying the spring fashions. Even in the snow-covered mountainous areas, the tourist season has begun. After the "Golden Week", or the early May holidays, the number of Japanese tourists at all tourist destinations will ...
Weather in Tokyo in May (overview)
टोक्यो मौसम मे (२०१ 2018) को सुरूमा
टोक्यो मौसम मे (२०१ 2018) को बीचमा
टोक्यो मौसम मेको अन्तमा (२०१))
टोकियोमा मौसम मेमा (अवलोकन)
ग्राफ: मेको मा टोकियो मा तापमान परिवर्तन
यदि तपाई मेमा टोकियो जानुहुन्छ भने तपाईले धेरै आरामदायी यात्राको आनन्द लिनुहुनेछ। माथिको ग्राफले देखाउँदछ, मे र मध्य मेमा, टोकियोमा दिनहरू तातो वा धेरै चिसो हुँदैनन्।
व्यायाम गर्दा, तपाईंले पसिना फुटाउन सक्नुहुन्छ। यद्यपि यो अझै गर्मी जस्तो तातो छैन। तपाईं दिनभरि छोटो-बाहुको शर्ट लगाएर ठीक हुन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ धेरै घमाइला दिनहरू तर केहि बरसातका दिनहरू छन्। कहिलेकाँही धेरै दिन सम्म निरन्तर वर्षा हुन्छ।
मेषिको अन्त्यमा वर्षाका दिनहरूको संख्या बिस्तारै बढ्नेछ। तापक्रम पनि बढ्नेछ र दिनहरू आउनेछ जब तपाईं न्यानो र आर्द्र महसुस गर्नुहुन्छ। जापानमा एक बरसातको मौसम हुनेछ जुन जूनमा ग्रीष्म monthsतुका साथ शुरू हुने छ।
अधिकतम तापमान (सेल्सियस) 28.1
न्यूनतम वायु तापमान 10.0
कुल वर्षा 93.0 मिमी
राम्रो मौसम अनुपात 38%
मे,, २०१.। शिबुया शपिंग सडक जिल्ला, टोकियो, जापान = शटरस्टकमा मानिसहरू भीड
जापानमा, धेरै सार्वजनिक बिदाको "सुनौलो हप्ता" around मे around सम्म जारी रहनेछ। त्यहाँ जापानी पर्यटकहरूको ठूलो संख्या देश भित्र र बाहिर यात्रा गरिरहेका छन्। यद्यपि गोल्डन वीक सकिएपछि टोकियोको टुरिष्ट क्षेत्रहरूमा जापानी पर्यटकहरू थोरै हुनेछन्। सुरुदेखि मेको मध्यसम्म मौसम एकदम सहज छ। तपाई सजिलैसँग भ्रमण गर्न मजा लिन सक्षम हुनुपर्दछ।
मेको प्रारम्भमा, टोकियोमा सूर्योदय समय around::4 वरपर हुन्छ र सूर्यास्त समय १ 46: .० तिर हुन्छ।
न्यूनतम वायु तापमान 9.0
कुल वर्षा 49.0 मिमी
मे १:: जापानको टोकियोमा कान्डा मत्सुरीमा सहभागीहरू। कान्डा मत्सुरी जापानको तीन मुख्य उत्सवहरू मध्ये एक हो = शटरस्टक
मध्य मेमा, टोकियो मा मौसम धेरै हल्का र आरामदायक हुनेछ। तापक्रम एकदम चिसो वा तातो हुँदैन त्यसैले तपाईं आरामसँग यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ।
क्योटोको जिओन फेस्टिवल र ओसाकामा तेन्जिन महोत्सवको साथसाथै जापानको तीन प्रमुख उत्सवमध्ये एक कान्डा मत्सुरी महोत्सव यस समयमा टोकियोमा आयोजना हुनेछ। विवरणका लागि कृपया यस पृष्ठमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। कृपया सन्दर्भ गर्नुहोस् यो पृष्ठ विवरण लागि।
मध्य मेमा, टोकियोमा सूर्योदय समय लगभग :4::37 हुन्छ, र सूर्यास्त समय लगभग १:18: 39। हुन्छ।
अधिकतम तापमान (सेल्सियस) 27.6
न्यूनतम वायु तापमान 13.7
कुल वर्षा 23.5 मिमी
राम्रो मौसम अनुपात 39%
मे २,, २०१ 23: ओडाइबा वास्तविक आकारको यूनिकॉर्न गुंडम मूर्ति मोडल डाइभर सिटी प्लाजा टोक्यो अगाडि ओडाइबा, जापानमा = शटरस्टक
मेको पछिल्लो समयमा, टोकियोमा तापमान एकदम उच्च हुनेछ। तपाईंले माथिको तालिकामा देख्न सक्नुहुनेछ, दिनको अधिकतम तापमान २ degrees डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी हुनेछ। आर्द्रता अलि बढी हुँदै जान्छ र मानिसहरूलाई वर्षाको मौसम नजिकै आउँदैछ जस्तो लाग्न सक्छ।
मेको अन्तमा, टोकियोमा सूर्योदय समय करिब 4::30० र सूर्यास्त समय १ 18::46 वरपर हुन्छ।
※ सूर्योदय र सूर्यास्त समयहरू जापानको नेशनल एस्ट्रोनोमिकल वेधशाला द्वारा जारी गरिएको २०१ data डाटामा आधारित छन्। मैले मेको सुरूवातको लागि 2019th औं समय, मेको बीचमा १ the औं समय र मेको अन्त्यको लागि २th औं समय पोस्ट गरे।
"May" मा फर्कनुहोस्